EBEE KA IBUDATA MFC100U.DLL MA DOZIE NJEHIE MGBE ỊMALITE USORO IHE OMUME AHỤ - ISIOKWU - 2019
I kwesiri iche na i nwere njehie na Windows: enweghi ike ibido ihe omume a n'ihi na mfc100u.dll faịlụ adighi na komputa. N'ebe a, ị ga-ahụ ụzọ iji dozie njehie a. (Nsogbu oge maka Windows 7 na usoro Nero, AVG antivirus na ndị ọzọ)
Nke mbụ, Achọrọ m ịma na ị gaghị achọ ebe ebe DLL dị iche: nke mbụ, ị ga-achọta ebe dịgasị iche iche na-enyo enyo (na ị maghị ihe ga-abụ na mfc100u.dll na ị na-ebudata, enwere ike inwe koodu mmemme ọbụla ), nke abuo, ọbụlagodi mgbe ị tinyere faịlụ a na System32, ọ bụghị eziokwu na ọ ga-eduga n'ịme egwuregwu ma ọ bụ mmemme nke ọma. Ihe niile dị mfe.
Na nbudata mfc100u.dll site na saịtị Microsoft
File mfri mfc100u.dll bụ akụkụ nke Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable na ngwugwu a nwere ike ibudata na weebụsaịtị Microsoft ọrụ n'efu. N'otu oge ahụ, mgbe nbudatachara, usoro mmemme ahụ ga-edeba faịlụ niile dị mkpa na Windows, ya bụ, ị gaghị edetuo faịlụ a n'ebe ọ bụla ma denye ya na usoro.
Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable ngwugwu na saịtị nchịkọta ọrụ:
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5555 (version x86)
N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ iji dozie njehie ahụ metụtara eziokwu na mfc100u.dll na-efu na kọmputa ahụ.
Ọ bụrụ na n'elu anaghị enyere aka
Ọ bụrụ na ọ nwụsịrị, ị ga-enweta otu njehie ahụ, chọọ faịlụ mfc100u.dll na folda ahụ na usoro nsogbu ma ọ bụ egwuregwu (ị nwere ike ịme ka ngosipụta nke faịlụ zoro ezo na usoro faịlụ) ma, ọ bụrụ na ịchọta ya, nwaa ịmegharị ya ebe (dịka ọmụmaatụ, na desktọọpụ). ), wee malitegharịa usoro ahụ.
O nwekwara ike ịbụ ọnọdụ dị iche: faịlụ mfc100u.dll adịghị na nchekwa ihe omume ahụ, mana achọrọ ya n'ebe ahụ, wee nwaa nke ọzọ: wepụ faịlụ a site na nchekwa System32 ma detuo (emezugala) na nchekwa mgbọrọgwụ nke usoro ihe omume ahụ.